Ihe Nduzi Ejiri Nkpukpo Egwuregwu Ultimate ude | Di na Nwunye Maka Uzo
August 19, 2019 / Ahapụ a Comment
Ude ude dị ka nri anwansi. Ọ dị ka ihe niile ọ metụrụ na-aghọzi ọla edo culinary. Kedu ihe na-aga na ude chiiz, oleekwa otu ị ga - esi jiri ya mee ihe na nri ụbọchị ọ bụla iji mee ka kichin gị sie ike ma dị ụtọ?
Ọ bụrụ na ị nwere cheese cheese dina na kichin gị, lee ụfọdụ nri nri ị nwere ike ị jikọta ya na nke ị na-echebeghị!
Kuki adịlarị mma n'onwe ha. Ma mgbe ị gbakwunyekwara chiiz cream na ha, ha ga-agbanwe bụrụ ihe dị n’eluigwe. Can nwekwara ike iji ụdị kuki ọ bụla. Choco mgbawa, oatmeal, bọta - kpọọ ya, ị nwere ike itinye ude chiiz na ya.
Chọrọ ihe nke dị oke njọ? Were kuki abuo, gbasaa ude chiiz n’elu ma tinye ha ọnụ maka ihe eji megharịa ọnụ chiiz sandwich cum ga-agbagha n’ezie.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta dị ka nke dị ụtọ, tinye lemon ma ọ bụ oroma zest na ihe okike gị maka zing! Nke a bụ maka ude na citrus na-aga nke ọma.
Ee, ị gụpụtara ya. Ihe oriri a na-ere ọkụ na-aga nke ọma na ude chiiz. N'ezie, ude chiiz bụ onye ọlụlụ zuru oke maka jalapeno. Ngwaahịa mmiri ara ehi dị ka ude chiiz nwere ike wepụ uche ya nke ọkụ ọkụ na-ewepụta.
Yabụ mgbe ị tinye ude chiiz na efere Jalapeno na ya, ihe ị ga - enweta bụ nguzozi zuru oke n'etiti okpomoku ọkụkọ na ihe na - eme chiiz.
Chọrọ nri dị mfe ị nwere ike ịme na ijiji? Mgbe ahụ, nweta jalapenos, anụ ezi, na chiiz ude. Nri nnu a, nnu, na mmiri aka gị ga na-atọ gị ụtọ, ọ ga-atọ onye ọ bụla ụtọ na ọ ga-ata ụtọ ya.
Nri ụtụtụ nke nri French tores na strawberry na ude chiiz na-ejuputa na Mpekere lemon
A nwere onye na-akwado mmanya ọkụ French? Mgbe ahụ ị ga-ahụkwu ya n'anya mgbe ị na-etinye ude chiiz na ya. Achịcha tours na faranti ejirila nsenyi na-atọ ụtọ. Ma mgbe ị gbakwunye ude chiiz na ya, ihe ahụ dum na-aghọ ọkaibe na uto.
Ihe kachasị mma banyere ude chiiz French jupụtara na French bụ na ọ dị mfe ịme. Naanị nweta achịcha, jupụta na nnukwu ude ude, jupụta ya na akwa, wee sie ya na mbido ruo mgbe ọ chara acha na agba aja aja. N’ezie, ị ga-achọ inwe sekọnd.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mkpụrụ osisi niile na-aga nke ọma na ude chiiz. Thezọ kachasị mfe iji rie ude chiiz na mkpụrụ osisi bụ iji ya mee ka nsị. Tinye tinye ude chiiz n'ime nnukwu efere, ghee ụfọdụ apụl, strawberries, ma ọ bụ pears, gbanye mkpụrụ osisi ahụ na ude chiiz ma nwee obi ụtọ.
Nke a bụ oge kachasị dị mfe ma bụrụ sọks ude na-ejikọta ọnụ na ị nwere ike ịnwale. Nwekwara ike ịme Pizza mkpụrụ osisi. Mepụta ofe pizza site na mgwakota agwa kuki, gbasaa ude chiiz na ya, ma jiri ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche kpuchie ya.
Nke a bụ ihe ụtọ na pụrụ iche eji megharịa ọnụ nke ga-abụ staple na kichin gị.
Ahịhịa na tomato, ude chiiz, pasili na ose ojii na efere ọcha
Ude ude abụghị naanị na mkpụrụ ya na-aga nke ọma. O nwekwara ike mee ka akwụkwọ nri na-atọkwu ụtọ. Dị ka mkpụrụ osisi, ị nwekwara ike iji ude chiiz dị ka mpekere maka akwụkwọ nri dị ka kar, kukumba, na ọbụna ọka dị ka letus.
Ọ bụrụ na ịnwere oge ụfọdụ n'aka gị mgbe ahụ ị nwere ike ịme canapes akwụkwọ nri dị ụtọ. Na efere a dị mfe ịkwadebe. Naanị nweta ụfọdụ achịcha ma ọ bụ obere iberibe achịcha, gbasaa ụfọdụ ude chiiz na ya, ma jirizie akwukwo nri kachasị masị gị.
Maka uto agbakwunyere, ị nwere ike itinye ya ogwu. Nke a bụ nri mkpịsị aka nri zuru oke maka oriri mmemme oriri na nkwari abalị gị
Salad akwa bụ nri dị iche iche nwere ike iji dị ka efere ma ọ bụ ịgbasa na achịcha na crackers. Nwere ike ọbụna ya akwa salad na ya. Tinye ya n’elu ahịhịa na-acha agba ga-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọkwu ụtọ.
Ọ bụkwa ihe kachasị amasị ndị nne n'ihi na ọ dị mfe ịkwadebe. Nothapụ ikwu na ọ na-eri ezigbo nri n'ihi na ejupụtara ya na protein site na akwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ụdị ude salad na akwa egg, ihe ị ga - eme bụ ịgbakwunye ude chiiz na ya.
Na ude chiiz, salad egg gị ga-enweta nkwalite ngwa ngwa. Ezinaụlọ gị ga-ahụrịrị ụdị agba ọhụrụ a ama ama.
Echiche You Nwere Ike With Ga-eji Mmanụ Ala Dị Nro
Ọ bụrụ na i mee ka ude chiiz dị nro, ọ ka ọ baa uru karị. You nwere ike iji chiiz cream dị nro n'ọtụtụ ụdị dịgasị iche iche, site na ngwa nri na ihe ọ andụ andụ na ihe ọ beụveraụ. Ndị a bụ ụfọdụ echiche maka ihe ị ga - eme na ude chiiz dị nro.
Jiri ya maka ofe
Mgbe ị gbakwunye ude chiiz nke dị nro na ofe ọ bụla, nsonaazụ ya bụ efere creamy na savory ị ga-echefu ngwa ngwa.
Kama ude dị larịị, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbakwunye ude chiiz dị nro na nduku eghe gị Itsgbakwunye anụ ezi, ị ga-enwe ofe na ude bara ụba nke nwere ike karịrị nke ọ bụla.
Jiri ya na achịcha
Kedu ihe ka mma karịa icing? Ude ude chiing n'ezie! Mgbe ị jiri achicha chiiz kọfị mee ihe ị na-atụgharị, ị na-atụgharị ya ka ọ bụrụ ihe eji eme mmehie, nke ị na-agaghị eche banyere inwe ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na ị chere na ịchọrọ ịbụ pro iji mee ude chiiz icing, chee echiche ọzọ. Ọ dị mfe nke ukwuu ịkwadebe. Iji ihe igwekota, kụọ ude chiiz na nnukwu nnukwu efere. Jiri nwayọ tinye bọta na ya wee kụọ ya ruo mgbe ha jikọtara ọnụ.
Jiri nwayọ ghaa shuga na ngwakọta ma tie ihe ahụ dum ruo mgbe ọ ga-adi ire. Ọ bụ ya! I meela kacha atọ ụtọ n’ụwa.
Mee Mkpo Macy na Mac
Naanị mgbe ị ga - eme ka mac na chiiz ka mma, ebe a na - abịa ude chiiz nke na - eyi egwu ịtụgharị ya n'ime nri pasta kacha mma.
Iji kwadebe ya, naanị ihe ị ga - eme bụ ịkpụkọta ude chiiz dị nro. Dinggbakwunye ụfọdụ cheddar ga-enye ya ezigbo ụtọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ude chiiz bụ ihe eji arụ ọrụ dịgasị iche nke na-aga nke ọma na nri ọ bụla ma ọ bụ efere ọ bụla. Kekọrịta edemede a ma hapụ nkọwa ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya!
Category: culinary, Nri na ihe ọṅụṅụ
← Ihe Ihe M Ga-eme Na Chiang Mai
10 saịtị ndị mere eme iji hụ na Guatemala →